Tsvaga kuti sei uchida VPN, maitiro ekusarudza yakanakisa uye yedu yekusarudza yepamusoro 10 VPN masevhisi ekukurumidza, kuvanzika uye kutenderera
VPN isoftware kana app yaunokwanisa kuisa pane yako PC, smartphone kana chero imwe kifaa chekumba kuti usimbise kuchengetedzeka kwayo ipapo. Kuishandisa kunovimbisa kuti yako yese yewebhu traffic yakavharidzirwa, izvo zvinoita kuti zviomere vateki - uye kunyangwe ISP yako - kuteedzera zvaunoita online.
Kunyangwe iko kukiya kuri kudzikira munzvimbo zhinji dzepasi, zviuru zvevanhu zvichiri kushanda kubva kumba, zvichisiya michina ichinyanya kubatwa nekurwiswa. Mamwe makambani anopa VPN masevhisi kune avo vese vashandi, asi kana vasingadaro, saka unofanira kuisa mari mune yakanaka iwe pachako. Nekutenda, kunyangwe akanakisa eVPN masevhisi haabhadhare anodarika mashoma mapaundi kana madhora pamwedzi.
Uchishandisa VPN, unogona kusarudza yako default nyika kuti uchinje yako IP kero, kuwana pakarepo kusazivikanwa uye nekukurumidza kumhanya, izvo zvakanaka kana uchishanda kubva kumba. Asi maVPN akanaka - kusanganisira iwo atinotaura pazasi - zvakare rega iwe uwane mawebhusaiti uye masevhisi ekushambadzira akavharwa munyika yako.
Izvi zvinoreva kuti iwe unogona 'kunyatso' tunnel yako yese yewebhu traffic kuburikidza chero nyika iwe yaunoda. Semuenzaniso, unogona kushandisa VPN kuwana maUS-chete mawebhusaiti senge HBO Max, Hulu, American Netflix uye Disney Plus zvisinei nekuti urikupi kubhurawuza kubva pasi.
Kune zvimwe zvakanaka kuVPN, zvakare: inogona kukupa iwe ipapo kuwana kune masosi ayo ISP yako akavharira chero chikonzero. Iwe unogona kutomhanya BitTorrent pamusoro peiyo VPN yekubatanidza uye nekugovana mafaera mukuchengeteka pasina kufumura chako chitupa. Kunyoresa kamwe kweVPN kazhinji kunovhara akawanda madhijitari uye iwe unogona zvakare kuisa VPN pane yako router kudzivirira ako ese epamba zvishandiso panguva imwe chete.
Asi ngativei pachena: VPNs hadzisi dzekushambadzira uye kurodha saiti. Kuvanzika kwavanowana hakuna mutengo. Vanobvumidza varidzi vemapipi kuburitsa ruzivo mukufarira veruzhinji vasingatyi kutsvakwa. Uye kune avo vanogara muhutongi hunodzvinyirira, VPN inogona kunge iri yega nzira yakachengeteka yekugovana zvinhu zvine nharo. Yedu akanak VPNs (ExpressVPN uye NordVPN) kunyangwe shanda muChina, uchipfuura yakakurumbira Great Firewall yeChina.
Unogona kufunga kuti zvimwe zvezvambotaurwa hazvishande muUK kana US, asi nemitemo ichangoburwa inoita kuti zvive nyore kuti hurumende isore chiitiko chako chepamhepo, chingave chiri zano rakanaka kutanga kushandisa VPN yakanaka. Nemazhinji maVPNs kunze uko, zvakadaro, izvi zviri nyore kutaura pane kuzviita.
Akanakisa maVPN ekumhanyisa, kuvanzika uye kutenderera: Pakutarisa
Yakanakisa VPN sevhisi: ExpressVPN
Yakanakisa VPN yekushandisa kwemazuva ese: NordVPN
Yakanakisa bhajeti VPN: Surfshark VPN
Best VPN yekuwana masevhisi ekushambadzira: CyberGhost VPN
Yakanakisa VPN yevashandisi vehunyanzvi: PIA VPN
Maitiro ekusarudza yakanakisa VPN sevhisi yako
1. Yakasimba isina-matanda mutemo
Mamwe maVPN ane mhosva yekuchengetedza mitengo yakaderera zvakakwana kuti inyengere vatengi, asi vozowana mari kubva kumakambani echitatu-mapato vanobhadhara makambani aya kune data rakakosha rekuvhura revashandisi. Neichi chikonzero, isu tinokurudzira zvine simba kusaita yemahara VPN masevhisi, kunyangwe iri nzira huru yekuyedza mvura usati wazvipira kusevhisi kwenguva refu. Yedu yepamusoro maVPNs (ExpressVPN uye NordVPN) vaenda nhanho kumberi uye vakaita kuti masevhisi avo ese aongororwe nemakambani makuru mana kuti varatidze kuti havanyori kana kuchengeta chero dhata remushandisi chero.
Kuchengetedza ndizvo zvese kana zvasvika pakushandisa VPN. Isu tinongokurudzira mabasa anoshandisa kanokwana AES-256 bit encryption. Muchidimbu, ndiwo mwero wakaenzana wekuchengeteka unoshandiswa nevazhinji vehurumende, kusanganisira NSA, kuchengetedza data rakakamurwa. Heano a tsananguro huru kubva kuNordVPN nezvekuti data rako rinogona kuburitswa sei kana usiri kushandisa VPN.
Zvese zvakanaka uye zvakanaka kuti maVPN anokwanisa kukudzivirira kubva pameso ekunzvera, asi iyo poindi yekuishandisa inokurirwa kana sevhisi yauri kushandisa isingape kukurumidza kukuru. Tiri muzera re5G, saka ndiani angatipa mhosva kana isu tajaira kuwana ruzivo ipapo pedu, uye hapana chikonzero nei VPN yako isingafanirwe kupa izvo. Yedu yepamusoro VPN, ExpressVPN, yakapihwa mashoma ekumhanyisa kurasikirwa kunyangwe kana uchibatanidza kupfuura marefu marefu (kuenda kuUS neAustralia) kubva kuUK.
Chimwe chezvikonzero chikuru chinoita kuti vanhu vashandise maVPN mazuva ano kushandisa masevhisi ekushambadzira asingasvikike munyika kana mudunhu mavo. Ethu matatu ekumusoro maVPN ane zviuru zvemaseva akasaswa zvine hunyanzvi pasirese. Kuva nemaseva akawanda munyika unozoona kuti kumhanya kwako hakuna kumbopunzika kana uchirarama-uchifambisa mitambo yako yaunofarira kana mabhaisikopo. CyberGhost zvakare ine yakatsaurwa yekushambadzira tebhu, inonyora ese anozivikanwa emitambo uye vhidhiyo ekushambadzira masevhisi epasirese iwe aunogona kushamwaridzana nawo nekamwe kudzvanya.
5. Huwandu hwekubatana panguva imwe chete
Munhu wepakati ane angangoita mashanu zvishandiso anoshandisa iyo internet, saka hapana chikonzero chako VPN isingafanire kushanda pane ese iwo. Ese maVPN edu epamusoro anogona kushandiswa pane mashoma zvishanu zvishandiso panguva imwe chete, uye mamwe (senge Surfshark VPN) kunyange bvumira zvisingagumi kubatana panguva imwe chete.
6. 24/7 rutsigiro rwevatengi
Tinotarisira rutsigiro rwakakura rwevatengi kana isu tikabhadhara yeprimiyamu sevhisi, saka hapana chikonzero maVPN haafanire kuitirwa kune imwechete yepamusoro mwero. Ese edu epamusoro maVPN ane anobatsira nhanho-nhanho tutorials uye 24/7 rutsigiro rwevatengi kana iwe uchida rubatsiro nechero chinhu chero nguva yezuva.
Iwo akanakisa maVPN ekumhanyisa, kuvanzika uye kutenderera
1. ExpressVPN: Yakanakisa VPN sevhisi muna 2020
Best deal: Wana mwedzi mitatu yemahara pane 3-gore chirongwa | Tenga ExressVPN izvozvi
ExpressVPN yese sevhisi yakaongororwa yakazvimiririra nePwC kuratidza kuti haina kuvhara kana kuchengeta chero mushandisi dhata chero, uye kubatana kwayo kumhanyisa kuUS, Europe neAustralia zvakapetwa zvakapetwa pane zvataishandisa zvakanyanya mamwe maVPN. Icho handicho chete chikonzero nei ExpressVPN iri yedu isingazivikanwe nhamba imwe VPN sevhisi. Iyo yekumisidzana ine yakazara nemwenje inobata iyo inoita kuti iyo yakazara mushandisi ruzivo ive inonakidza uye inotsvedzerera. Semuenzaniso, zvinokukurudzira kuti ubvise kubatana kumwe usati waita imwe kuti uve nechokwadi chekuti ruzivo rwako harubvuure.
Bhonasi ndeyekuti sevhisi yakavakirwa muBritish Virgin Islands, iyo isina dhata yekuchengetedza kana yekugovana mitemo. Yayo PC mutengi uye nharembozha zvinotaridzika uye zvinoshanda zvakafanana pamidziyo uye zvinokutendera iwe kuti uwane zvese zvirimo geo-yakavharirwa zvemukati - zvinosanganisira Netflix, Disney Plus, BBC iPlayer, Amazon Prime, HBO uye Hulu. Iwe unogona kutobvunza sevhisi yevatengi kuti ndeipi bhaisikopo kana terevhizheni yaungade kuona uye ivo vanokuudza iwe kuti ndeupi masevhisi ekushambadzira uye nyika yekubatanidza. Zvinogona kunge zvisiri zvakachipa semamwe maVPN ari pane ino runyorwa, asi zvinokodzera peni yega yega yekumhanya kwazvo uye nebasa rakanakisa revatengi chete.
Read yedu ExpressVPN kudzokorora nokuti zvakawanda
Key specs - Kuzvimirira hapana-matanda odhita: Ehe; Kunonyanyisa kubatana panguva imwe chete: 5; 24/7 rutsigiro rwevatengi: Ehe; Inokutendera iwe kuwana masevhisi ekushambadzira: Ehe; Mari yekudzosera vimbiso: Hongu - mazuva makumi matatu; Kubva mu: British Virgin Islands
Tenga ExpressVPN ikozvino
2. NordVPN: Yakanyanya VPN yekushandisa kwemazuva ese
Best deal: Sevha 68% pane chirongwa chemakore maviri | Tenga NordVPN izvozvi
NordVPN ishamwari, nyore kushandisa VPN ine hombe, mepu-yakavakirwa interface. Kunyangwe yaigara iri yakajeka sevhisi yeVPN sevhisi, ichangobva kugadziridzwa yakango ita kuti ikurumidze uye ive yakachengeteka. Iwe unogona kuverenga nezve izvi zvakadzama mune yedu ongororo (chinongedzo pazasi). Chinoita kuti chive chakakosha ihwohwo "Smart Play" tekinoroji iyo inoita kuti iwe usvike kushambadzira sevhisi kuti utarise mafirimu uye TV zvinowoneka zvisingawanikwe kuUK. Iyo sevhisi ine network yakakura yemaseva anopfuura zviuru zvishanu munzvimbo makumi matanhatu nenomwe.
Kuvanzika ndeimwe yemasimba makuru eNordVPN. Iyo sevhisi yakavakirwa muPanama, saka unogona kuve nechivimbo chekuti vakuru veUK havazombokwanisa kuisa maoko avo pane chero dhata rako. Sa ExpressVPN, NordVPN yakapedzawo ongororo yakazvimiririra kuratidza kuti haina chengetedzo kana matanda evashandisi. Kunze kweizvi, yakavakira-mukati kushambadzira uye malware ichivharira, 24/7 kutsigirwa kwevatengi uye inoshanda muChina.
Read yedu NordVPN review nokuti zvakawanda
Key specs - Kuzvimirira hapana-matanda odhita: Ehe; Kunonyanyisa kubatana panguva imwe chete: 6; 24/7 rutsigiro rwevatengi: Ehe; Inokutendera iwe kuwana masevhisi ekushambadzira: Ehe; Mari yekudzosera vimbiso: Hongu - mazuva makumi matatu; Kubva mu: Panama
Tenga NordVPN izvozvi
3. Surfshark VPN: Yakanakisa bhajeti VPN
Best deal: Sevha 81% pane chirongwa chemakore maviri | Tenga Surfshark VPN izvozvi
Inofananidzwa nemamwe mazita makuru pane ino runyorwa, Surfshark ingangoita mutsva kunzvimbo yeVPN, yatanga muchirimo cha2018. Izvo hazvisi pachena paunotanga kuishandisa nekuda kweayo akawanda maficha maficha: ine yakapusa, yakapusa- kushandisa-interface, haigone chero dhata, hapana muganho pane huwandu hwemidziyo yaunogona kuishandisa panguva imwe chete uye yakavakirwa muBritish Virgin Islands, iyo isina dhata yekuchengetedza kana yekugovana mitemo. Kana ukasangana nedambudziko, unogona kungotaura nekutsigirwa nevatengi, iko kunowanikwa online 24/7, uye kune kunyange 30-mazuva-ekudzoserwa mari mari kana usiri kufara nebasa.
Surfshark VPN ine pamusoro pemaseva chiuru munyika dzinopfuura makumi matanhatu, iyo inovhura mhando dzese dzemukati dzinosanganisira Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Vhidhiyo uye kunyangwe BBC iPlayer inozivikanwa kuti inonetsa kuwana kubva kunze kwenyika. Ichangobva kuwedzera maraibhurari gumi nemashanu eNetflix, kusanganisira UK, US, Canada neGerman uye kuwana Hotstar, inova yeIndia yekushambadzira sevhisi yemitambo nemamuvhi pasirese. Kunze kweizvi, inotove nezvimwe zvinhu zvakanaka zvinowedzera-asi izvo zvaungasazoshandisa kazhinji, kusanganisira shambadziro-blocker uye chinhu chemahosi.
Read yedu Ongororo yeSurfshark VPN nokuti zvakawanda
Key specs - Kuzvimirira hapana-matanda odhita: Aihwa; Kunonyanyisa kubatana panguva imwe chete: Unlimited; 24/7 rutsigiro rwevatengi: Ehe; Inokutendera iwe kuwana masevhisi ekushambadzira: Ehe; Mari yekudzosera vimbiso: Hongu - mazuva makumi matatu; Kubva mu: British Virgin Islands
Tenga Surfshark VPN izvozvi
4. CyberGhost VPN: Zvakanakisa kuwana masevhisi ekushambadzira kunze kwenyika
Best deal: Sevha 82% pane chirongwa chemakore maviri | Tenga CyberGhost VPN izvozvi
CyberGhost VPN ine yakapusa nyore PC mutengi interface ine chete inotsvedza, asi wedzera iyo uye iwe uchawana nyika yeanogona. Isu tinoda kuti iratidze chinhambwe chako kune chaiwo maseva uye azvino mutoro muzana. Maseva ari kure kure kubva kwauri anononoka, zvakafanana zvinoenda kune avo vane yakakwira mutoro muzana. Vanhu vazhinji mazuva ano vanoshandisa maVPN ekuyerera uye kuyerera uye CyberGhost ine sarudzo dzinobatsira zvakanyanya kune iwo mabasa. Maseva anozivikanwa pamasevhisi akasarudzika senge BBC iPlayer, US Netflix, YouTube uye ESPN uye ese aya anoshanda sekushambadzirwa. Inobatsira yekuwedzera yekuwedzera inosanganisira iyo sarudzo yekuvharira kushambadzira, mawebhusaiti ane ngozi uye online yekutevera.
App yayo inoita senge iyo PC mutengi, zvinoreva kuti hapana yekudzidzira curve inobatanidzwa. Zvirongwa zvakare zvinochengetedza zvakanakisa zvePC mutengi, kusanganisira iyo sarudzo yekuwana masevhisi ekumhanyisa uye maka makavha maseva seanofarira kuwana nyore. Iyo yekuuraya iyo yakavhurwa nekumisikidza kuitira kuti kubhurawuza kwako basa kusabudike kana VPN netsaona ikabvaruka chero chikonzero. Ese maseva ayo ari munzvimbo yayo chaiyo kusiyana nemamwe masevhisi eVPN, ayo dzimwe nguva ane maseva chaiwo. Sevhisi inosarudzika inosarudza yakanakisa VPN protocol zvinoenderana nechishandiso chauri kushandisa.
Read yedu CyberGhost VPN kudzokorora nokuti zvakawanda
Key specs - Kuzvimirira hapana-matanda odhita: Aihwa; Kunonyanyisa kubatana panguva imwe chete: 7; 24/7 rutsigiro rwevatengi: Ehe; Inokutendera iwe kuwana masevhisi ekushambadzira: Ehe; Mari yekudzosera vimbiso: Hongu - mazuva makumi matatu; Kubva mu: Romaniya
Tenga CyberGhost VPN izvozvi
5. PIA VPN: Zvakanakisa kune vashandisi vehunyanzvi
Best deal: Sevha 78% pane chirongwa chemakore maviri | Tenga PIA VPN izvozvi
Zvirinani kuzivikanwa sePIA, Yakavanzika Internet Kuwana VPN yave iripo kweanoda kusvika makore gumi. Izvi zvinoratidza muchigadzirwa chakakomberedzwa chinogona kuiswa ipapo ipapo pane akawanda madivayiri. Kusiyana nemamwe masevhisi pane ino runyorwa, unogona kuishandisa pane nerupo gumi zvishandiso panguva imwe chete, ichiita sarudzo yakanaka kuti mhuri ichengetedze kubhurawuza kwavo. PIA VPN ine pamusoro pemaseva e10 munyika dze3,000, dzinonyanya kuve muNorth America neEurope, iine nzvimbo nhatu muUK. Ipo iine yakaoma isina-matanda mutemo uye nekukurumidza kubatana, haina 30/24 rutsigiro rwevatengi, saka hatina kukwanisa kuzviisa pamusoro peiyi runyorwa.
Its Windows mutengi ane chiyero chakanaka pakati pezvinhu, kumhanya uye nyore kushandisa. Kunyangwe hazvo zviri nyore zvakakwana kune vekutanga-nguva kuti vangoiisa uye vatange kunakidzwa nezvakawanda mabhenefiti, isu tinoda kuti iine sarudzo dzinoverengeka dzinokwezva kune vamwe vashandisi vehunyanzvi. Izvi zvinosanganisira inogadzirisirwa killswitch uye yepamberi PIA Mace ficha inovhara nzvimbo dzinoshandiswa kushambadza, trackers uye malware. Iwe unogona zvakare kumisikidza split-tunneling kusarudza kuti ndeapi maapplication anongoshandisa iyo VPN.
Read yedu PIA VPN kuongorora nokuti zvakawanda
Key Keys - Yakazvimirira isina-matanda odhita: Aihwa; Kunonyanyisa kubatana panguva imwe chete: 10; 24/7 rutsigiro rwevatengi: Aihwa; Inokutendera iwe kuwana masevhisi ekushambadzira: Ehe; Mari yekudzosera vimbiso: Hongu - mazuva makumi matatu; Kubva mu: USA
Tenga PIA VPN izvozvi
6.StrongVPN: Zviri nyore kushandisa
Best deal: Sevha makumi mana nemasere muzana pagore regore | Tenga StrongVPN izvozvi
StrongVPN inogona kusazvirumbidza neakafanana maficha sevamwe maVPN ari pane ino runyorwa maererano nekumhanya, maseva uye mashandiro, asi kana iwe uchitsvaga iri nyore VPN iri nyore kushandisa, saka usatarise mberi. Zvese zvaunoda kuti uite kusaina-kurodha pasi, kurodha pasi app, isa zvitupa zvako uye wagadzirira kuenda. Saka mamwe akawanda masevhisi eVPN anogona kuita iyi yekutanga setup maitiro kuita basa.
Panyaya yekuvhara, Yakasimba VPN ine maseva muUK, US, Canada, Australia uye mazhinji eWestern Europe, asi kana iwe uri kutsvaga kuwana mukana wekushambadzira masevhisi mu Africa kana India, saka iwe zvirinani utarise kumwe kunhu. Panyaya yekushambadzira masevhisi, StrongVPN yakanaka kushambadzira US kana UK Netflix uye kunyangwe mamwe masevhisi eUS senge Comedy Central, asi isu takave nedambudziko rekuwana BBC iPlayer kubva kuUK patakapedzisira kuongorora. Kunze kwaizvozvo, ine zvese zvekutanga - senge rutsigiro rwevatengi, kumhanya uye maprotocol akafukidzwa zvakanaka.
Read yedu Yakasimba VPN ongororo nokuti zvakawanda
Key specs - Kuzvimirira hapana-matanda odhita: Aihwa; Kunonyanyisa kubatana panguva imwe chete: 12; 24/7 rutsigiro rwevatengi: Ehe; Inokutendera iwe kuwana masevhisi ekushambadzira: Vazhinji; Mari yekudzosera vimbiso: Hongu - mazuva makumi matatu; Kubva mu: USA
Tenga StrongVPN izvozvi
7. IPVanish: Zvakanakisa kudhawunirodha nzizi
Best deal: Sevha makumi mana nemasere muzana pagore regore | Tenga IPVanish izvozvi
Mazhinji masevhisi eVPN anorega iwe kuti usarudze kuti ndeipi nyika kana nzvimbo yaunoda kubatanidza mukati mekamuri rakatsvinda. Isu tinoda kuti IPVanish inotora iyi nhanho kuenda mberi nekukutendera iwe kuti usarudze nyika yako, guta uye kunyange sevha yega kana uchida. Kana iwe uchida kuita kuti zvinhu zvive nyore, iwe unogona kungosarudza iyo nyika uye wobva wasiya mamwe maviri kuenda kuGuta Rakanakisisa uye Best Server. Neimwe nzira, kana iwe uchida graphical mepu-yakavakirwa interface, iwe uchaona iyo sarudzo yekuswededza mukati meguta iwe raunogona kusarudza.
IPVanish yakakosha kudzorera ndeyekuti haipfuure akawanda geo-akavharirwa zvemukati, zvinoreva kuti hauzokwanise kuwana BBC iPlayer, Amazon Prime kana Hulu uye unoda kutaura nevatengi rutsigiro kuti utarise kuti ndeapi maseva eUS anovhura Netflix kupinda. HBO neYouTube zvinonyanya kukanganwira uye iyo VPN inobhadharisa zvishoma nekukurega iwe kuti uiise pane Kodi uye uishandise kurodha nzizi.
Iyo inodzivirirwa neakanyanya-akachengeteka AES 256 encryption uye inoshandisa OpenVPN kana IKEv2 protocols, kuichengeta ichienderana nemamwe anozivikanwa maVPN. IPVanish inotsigira ane rupo gumi akabatana akawanda uye pane 24/7 kutsigirwa kwevatengi. Patakatanga kuiongorora, pakanga paine chete-mazuva manomwe-ekudzoserwa mari, asi izvi zvave kuwedzerwa kusvika pamazuva makumi matatu-zvichizviunza zvichienderana nemamwe maVPN akanaka pane edu runyorwa.
Read yedu IPVanish review nokuti zvakawanda
Key specs - Kuzvimirira hapana-matanda odhita: Aihwa; Kunonyanyisa kubatana panguva imwe chete: 10; 24/7 rutsigiro rwevatengi: Ehe; Inokutendera iwe kuwana masevhisi ekushambadzira: Aihwa; Mari yekudzosera vimbiso: Hongu - mazuva makumi matatu; Kubva mu: USA
Tenga IPVanish izvozvi
8. Hide.me: Yakanakisa VPN ine yakakosha sevhisi sevhisi
Best deal: Sevha 61% pane chirongwa chemakore maviri | Tenga Hide.me izvozvi
Kunyangwe hazvo mazhinji eVPN ari pane ino runyorwa - kusanganisira Hide.me - unouya nemazuva makumi matatu-isina-mibvunzo-yakabvunzwa mari yekudzoserwa mari, unogona kunge usingatauri nezvekupa yako kiredhiti kadhi ruzivo kune kambani iri mune rakasiyana chikamu chenyika. uye ungangoda kungoedza kuti VPN inoshanda sei. Hide.me's yemahara sevhisi inogumira kune 30GB uye shanu chete nzvimbo dzemahara, inova nzira yakanaka yekunyorovesa tsoka dzako usati wapinda mumvura yakachengeteka yeVPN.
Nekudaro, kana iwe uchinyatsoda kuona kuti sei Hide.me inozvimisikidza pachayo se "inokurumidza kwazvo VPN", ipapo uchafanirwa kukwidziridzira kune ayo ekutanga mapurani, ayo ane angangoita 2,000 72 maseva, akapararira munzvimbo dzese makumi manomwe nemaviri kutenderera pasirese uye maapplication e akasiyana siyana emidziyo. Tinoda chokwadi chekuti iyo Windows mutengi akareruka kushandisa, asi kune dzimwe nzira dzepamberi dzevashandisi vehunyanzvi vangade kumisikidza yavo VPN protocol, shandisa kupatsanura-tunneling zvichingodaro. Yedu chete yekushoropodza sevhisi ndeyekuti ndeimwe yeinodhura pane ino runyorwa.
Read yedu Viga.me VPN ongorora nokuti zvakawanda
Key specs - Kuzvimirira hapana-matanda odhita: Aihwa; Kunonyanyisa kubatana panguva imwe chete: 10; 24/7 rutsigiro rwevatengi: Aihwa; Inokutendera iwe kuwana masevhisi ekushambadzira: Ehe; Mari yekudzosera vimbiso: Hongu - mazuva makumi matatu (hapana-mibvunzo-yakabvunzwa): Kubva mu: Marazhiya
Tenga Hide.me izvozvi
9. HMA VPN: Yakanakisa UK-based VPN
Best deal: Sevha 63% pane chirongwa chemakore maviri | Tenga HMA VPN izvozvi
Kana iwe uchifarira zvishoma zveapasi rose-kutsika, HMA VPN ndeyako. Inozviti ine maseva munyika dzinopfuura zana nemakumi mashanu, zvichireva kuti kune mashoma nyika dzamusingakwanise kuongorora webhu senge yemuno. Nepo runyorwa rwekubuda node rungaratidzika kunge rwakawandisa, software yacho yakapusa uye ine ushamwari kushandisa. Kuita kwacho kwakangonaka, zvisinei: kubatanidza kuburikidza neUS akaona isu tangowana chete 190% yeyakajairika UK kurodha kumhanya.
Kunyoresa kamwe chete kunoita kuti ushandise sevhisi pazvishandiso zvishanu panguva imwe chete. Iyo kambani yakavakirwa muno muUK, icho chisiri chakanyanya kunaka kana zvasvika kumaVPN nekuti nyika zhinji dzakasimukira pasi rese dzine chibvumirano chekugovana dhata kana zvichidikanwa nekuda kwezvikonzero zvekuchengetedza. Kana iwe uine hanya nezve kuvanzika kwako, saka zvingave zvakakodzera kutarisa kune imwe yesarudzo dzambotaurwa pachinzvimbo.
Read yedu HMA VPN kuongorora nokuti zvakawanda
Key specs - Kuzvimirira hapana-matanda odhita: Aihwa; Kunonyanyisa kubatana panguva imwe chete: 5; 24/7 rutsigiro rwevatengi: Aihwa; Inokutendera iwe kuwana masevhisi ekushambadzira: Ehe; Mari yekudzosera vimbiso: Hongu - mazuva makumi matatu: Kubva mu: UK
Tenga Hwanda My Ass Pro izvozvi
10. YakachenaVPN: Yakanakisa yekutenderera
Best deal: Sevha makumi maviri nemana muzana pane chirongwa chemwedzi mitanhatu | Tenga KwakachenaVPN izvozvi
Kazhinji kutumira traffic yako hafu kutenderera pasirese kune zvakakanganisa zvakanyanya kukurumidza kweiyo internet yekubatanidza. Nekutenda, tichishandisa PureVPN, isu takakwanisa kudhawunirodha mafaera kuburikidza nekambani yeNew York server pane ingangoita 90% kumhanya kwekubatana kwedu kweUK, izvo zvinorumbidzwa. Isu takafarawo zvikuru nekuona kuti sevhisi yacho ngatitore nzvimbo dzakasiyana dzekushambadzira kusanganisira US Netflix, Disney Plus, BBC Player, HBO nevamwe.
Iyo yakavakirwa muHong Kong, iyo isina chero dhata-yekugovana kuronga nevakuru veBritish, saka iwe unogona kutarisira mwero wakanaka wekuvanzika, futi. Chinhu chimwe chete chatakaodzwa nacho ndeyechimiro chayo chinotaridzika kuva chakawandisa uye chemazuva zvichienzaniswa nemamwe masevhisi pane ino rondedzero ayo akareruka uye ari nyore kushandisa. Izvo zvakare harisi iro rakanakisa sevhisi kana usati wamboshandisa VPN pamberi.
Read yedu PureVPN kuongorora nokuti zvakawanda
Key specs - Kuzvimirira hapana-matanda odhita: Aihwa; Kunonyanyisa kubatana panguva imwe chete: 5; 24/7 rutsigiro rwevatengi: Ehe; Inokutendera iwe kuwana masevhisi ekushambadzira: Ehe; Mari yekudzosera vimbiso: Hongu - mazuva makumi matatu; Kubva mu: Hong Kong
Tenga KwakachenaVPN izvozvi
Yakanakisa yakachipa VPN masevhisi 2021
Yakanakisa VPN yeFrance mu2017, Yakadzika Kuenzanisa
VPNs zviri pamutemo muCanada here? Ndezvipi zvaunofanira kushandisa?
5 akanakisa VPNs yekushandisa pachako